Wararka - Viljaskolan
Jacayl la'aanteed, ma jiri doonto cunto wanaagsan!
Nofembar 25, 2021
Hi Sossig Kaspar oo cunto kariye ka ah Viljaskolan Angered! Adiga iyo asxaabtaada Mahnaz Ghodsi iyo Fahim Hasili in ka badan 200 oo caruur iyo dad waaweyn ah waxaad maalin walba ku karisaan jikada Viljaskolan. Maxay carruurtu jecel yihiin inay cunaan? Dad badan ayaa jecel lasagna, ...
Akhri wax dheeraad ah→
Ulrika Nyhlén - kalkaaliso caafimaad
Ogast 1, 2021
La kulan Ulrika Nyhlén - kalkaalisada dugsiga ee Viljaskolan ee Angered. Ulrika waxay ka mid noqon doontaa kooxdayada caafimaadka ardayga waxayna daryeeli doontaa hubinta caafimaadka iyo wadahadalada caafimaadka ee ardaydeena, laakiin sidoo kale waxay u soo bixi doontaa fasalka si loogu sheekeysto caafimaadka,…
Lovisa Beijer - ilaaliyaha dugsiga
Lovisa waa ilaaliyaha iskuulka Viljaskolan. La -taliye ahaan, waxaad caawisaa oo taageertaa carruurta iyo mas'uuliyiinta leh baahiyo kala duwan. Waxay ku saabsan tahay waxyaalo la taaban karo sida foomamka iyo kaalmada dawladda, laakiin waxa ka sarreeya oo dhan waxaad dareentaa ammaan iyo raaxo marka dugsigaaga.
5 Luulyo, 2021
Maanta waxaan ku soo bandhigeynaa Fahim Hasili - kaaliyaha cuntada ee Viljaskolan. Fahim waa kaaliye cunto tababaran wuxuuna hubin doonaa in ardaydeena ay helaan cunno wanaagsan jawi wanaagsan.
Shiren Yousif - baraha bulshada ee dugsiga kadib
2 Luulyo, 2021
Shiren Yousif waxay ka shaqeyn doontaa baraha bulshada xarunta dugsiga kadib iyo kaalmada fasalka iyagoo da 'yar. Si wada jir ah ula kaashan doona Aqoon yahanada waqtiga firaaqada ah, Shirin wuxuu gacan ka geysan doonaa waqti firaaqo firfircoon oo qani ku ah ardaydeena, laakiin sidoo kale amaan wanaagsan iyo
Sossig Kaspar - cunto kariye
21 Juun, 2021
Sossig Kaspar waa cunto kariye ka shaqeeya Viljaskolan. Iyada oo ay weheliso asxaabteeda jikada iskuulka, waxay hubin doontaa in ardayda oo dhan ay helaan qado iskuul wanaagsan oo nafaqo leh.
Petra Elio - Maamule kuxigeen
17 Juun, 2021
Salaan ka dib Viljaskolan oo ah maamule ku xigeenka Angered Petra Elio. Petra waxay leedahay khibrad balaaran oo ay kula shaqeyso hormarinta waxbarashada iyadoo lashaqeysa macalimiinta iyo dhalinyarada iskuulka Angeredsgymnasiet
Mahnaz Ghodsi - kaaliyaha cuntada
Maanta waxaan ku soo bandhigeynaa Mahnaz Ghodsi - kaaliyaha cuntada ee Viljaskolan. Mahnaz wuxuu si dhakhso leh uga qalin jabinayaa kaaliyaha cuntada ee tababarka wuxuuna noqon doonaa mid aad ugufiican ganacsigayaga cuntada. Sababtoo ah sida Mahnaz oo kale, waxay muujineysaa "cuntada wanaagsan ardayda waa maalgashi…
Joseph Maalouf - macalin dugsi dhexe
Maanta waxaan soo bandhigeynaa macalinka dugsiga dhexe ee Joseph Maalouf ee Viljaskolan. Joseph wuxuu u guurayaa Göteborg xagaagan. Sababtoo ah waxaan dooneynay inaan mar hore soo bandhigno, waxaan wareysi kula yeelannay kumbuyuutar.
Fiiri fasalka Viljaskolan, waxbarashadiisa, qolka cuntada iyo maktabadda. Si wadajir ah Frida Andersson, naqshadeeye gudaha IKEA Bäckebol waaxdeeda shirkadaha, waxaan si wada jir ah uga wada shaqeynay abuurida jawi iskuul oo taageera ardeyda waxbarashadooda, abuurida jawi shaqo oo wanaagsan iyo iskuul lagu faano…